Homepage - Main - BLI · Language Schools in Canada
Sei uchiita BLI?
Elementary uye High chikoro
Kudya kwemanheru kunyoresa
Iva An Agent
Shona Placement Test
Chirungu & French muCanada
Rarama uchidzidza · Ida kudzidza
Unoda kuziva mari yedu here?
Montreal iguta rakasiyana. Guta rine mutauro uye tsika. Guta rine European flavor rinokunyengedza kubva pazuva rokutanga.
Iri 'guta remiviri rinowanikwa pachitsuwa chiri kuSt. Lawrence. Ndiyo nzvimbo yakakwana yekudzidza Chirungu neFrench uye kuti uzvichenese mumutambo unofadza.
Hazvina mhosva kana ukasarudza kuuya, pane nguva dzose chimwe chinhu chinonakidza uye chinonakidza kuita. Zvingava muzhizha, mutambo, yekuvhuvhu kana yechando, pane nguva dzose pane chimwe chinhu chiri kuitika.
Quebec iguta rinoshamisa uye rakanaka. Ndiyo mwoyo weFrance mutsika muNorth America. Chikamu cheEurope muAfrica itsva. Vakuru pamhenderekedzo yeSt. Lawrence River, Quebec ndeimwe yemaguta anoyevedza munyika yose uye guta guru renyika yeQuebec.
Yakapfuma munhoroondo, maumbirwo netsika nevekuda kweEuropéan chikwata.
Seguta guru kupfuura rimwe reCanada iro 100% francophone, Quebec ndiyo nzvimbo yakakodzera yekuzvinyora mumutauro uye panguva imwechete inonakidzwa zvose izvo guta iri rakanaka rine iwe !!
Pane mapurogiramu akasiyana-siyana
BLI inopa zvakasiyana-siyana zvezvirongwa kuti zvienderane nezvido zvako. PaBI iwe uchawana purogiramu yauri kutsvaga.
Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekugara
Dhipatimendi redu rekugara rinopa maitiro akasiyana siyana aunogona kusarudza kubva.
Urarame mutauro waunenge uchidzidza nekupinda muchirongwa chedu chemagariro chinopa mabasa makuru zuva rega rega.
Tine chokwadi chekuti unogamuchira zvese zvinotsigirwa zvaunoda iwe uchirarama ruzivo rwekudzidza.
Visa & CAQ Rubatsiro
Kana iwe uchida vasa muenzi kana chibvumirano chekudzidza kuti uuye kuCanada, tinogona kukubatsira nekutora.
Tinokwanisa kuchengetedza hutano hwako hwehutano, izvo zvinotarisirwa kuti vadzidzi vose vauye kuCanada.
Tinokutora uye tinokukanda iwe ku-airport kuti uite ruzivo rwako rwekufamba kuCanada sezviri nyore uye wakasununguka sezvinobvira.
Zvinotaurirwa nevadzidzi vedu
Chimwe chechiitiko chakanakisisa chandakambove nacho. Ndainakidzwa zvikuru pano muMontreal ini handitombozivi kuti ndaitanga. Zvokudya, vanhu, nzvimbo, zvinhu zvaunogona kuita, zvinhu zvaunodzidza, zuva nezuva unodzidza zvishomanana zvenhau yeMontreal nenzira yakanyatsonaka
Ndinokurudzira 100% uye ini ndinouya zvakare ndisingafungi kaviri
Mudzidzi weChirungu - Mexico
Pandakasvika kuKanada, ndakanga ndisingazivi Chirungu kana ChiFrench. Mushure mokutora BLI Bilingual program, ruzivo rwangu rwemirimi mumitauro miviri yakavandudzwa kwazvo. Nhasi ndinogona kuti NDICHAITIKA
Mudzidzi weChipiri - Brazil
Ndakanyoresa BLI kuti ndidzidze Chirungu uye ndakava mudzidzi wepamusoro ari mumwedzi mishoma kunze kwe6. Vadzidzisi vane unyanzvi uye vanovimbisa kuti unonzwisisa nekudzidza zvose zvavanokudzidzisa. Makirasi anobatana zvikuru. Chikoro chine vadzidzi vanobva kumativi ose enyika saka ndakakwanisa kuita shamwari dzakawanda.
Mudzidzi weChirungu - Korean
70, rue Notre-Dame O., zvinotevera 400
COPYRIGHT 2017 BLI · Zvidzidzo zveLimi muCanada, ZVOSE ZVINOKOSHURWA